Kajy ny boky ao amin'ny lavaka fantsakana, dia cylindrical lavaka
Kajy ny boky avy amin'ny fantsakana
sary sehatra 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6
Top savaivony D1
Ambany savaivony D2
Kajy ny boky avy amin'ny fantsakana na vovo cylindrical endrika
D1 - ny ambony savaivony avy amin'ny fantsakana
D2 - savaivony ny ambany avy amin'ny fantsakana
H - Lalina
Ankoatra izany, dia afaka mamaritra ny vola lany amin'ny nandavaka lavadrano sy ny vola lany ny fanesorana ny tany.
Kajy ny boky
Misy safidy telo ho an'ny rano ny tranon'olona. Afaka drill ny lavaka ny tenanao, dia afaka nanakarama matihanina mba hatao, kanefa afaka mihady eo amin'ny toerana tsara. Fomba rehetra dia manana ny mahatsara sy maharatsy azy ireny. Maro ny olona tia handamina tsara ny toerana, satria mora izany, dia afaka mampiasa izany ho 50 taona mahery, ary manadio fanorenana izany mora kokoa noho ny tsara. Ankoatra ny nandavaka lava-drano tsy mila fahazoan-dalana manokana. Na izany aza, ny mihady eo amin'ny toerana tsara, tsy maintsy aloha manao kajy ny sasany. Eto ianao dia hanampy ny kajy fandaharana. Rehetra tokony ho atao dia ny miditra ao amin'ny saha tsara halalin'ny ao amin'ny lavaka fantsakana, dia ny tampony sy ny ambany ary ny vola lany savaivony ny excavation ao amin'ny faritra misy anao, dia ny fandaharana dia hanao kajy ny boky avy amin'ny fantsakana sy ny tombanana ny vidin'ny nihady.
Voalohany indrindra, any amin'ny tena nandavaka lava-drano dia ny safidy ny toerana ho azy. Zava-dehibe ny hanakatona izany ao anatin'ny nipoaka ny 50 metatra nisy storages zezika sy ny loto hafa izay mety hisy fiantraikany ny kalitaon'ny rano. Tsy ilaina ny handamina ny tsara kokoa noho ny 5 metatra avy any an-trano. Fa raha tsy izany dia misy ny mety manimba ny fototry ny trano noho ny leaching ny tany.
Zava-dehibe koa ny hamantatra ny halalin'ny fantsakana. Mety hamantatra ny halalin'ny rafitra mitovy amin'ny fizarana mifanila na talohan'ny drilled lavaka.
Mariho tsara fa tsy afaka mihady tsara amin'ny fotoana rehetra ny taona. Izany no tsara indrindra mifanaraka amin'ny vanim-potoana io amin'ny volana Jona ka hatramin'ny Septambra. Tamin'izany fotoana izany, dia ambany ny aquifer, izay midika fa tsy ho hamitaka ny rano avy ao amin'ny sosona ambony izay mba ho araka ny lohataona tondra-drano.
Ny zavatra manaraka tokony manahy no dia hanamafy ny rindrina avy amin'ny fantsakana. Indro misy safidy maro. Endriny hazo io, ary ny biriky simenitra monolithic. Tsirairay ireo dia manana tombony fomba manatanjaka. Ohatra, ny hazo mora indrindra filanjana azy. Fa amin'ny fanaovana izany izy naharitra ela. Ny androm-piainany ny tsy mihoatra ny 15 taona. Ankoatra izany dia tsy maintsy diovina isan-taona avy amin'ny silt. Koa mandritra ny nihady ny lavaka tsy nanamafy rindrina, ka ny mety rava ny tany.
Monolithic mivaingana tsara satria manala ny ingress ny ambonin'ny rano ho ao an-tsara. Fa toy izany tsara ve kokoa, ary dia lany lafo be kokoa. Eto manana safidy roa. Koa ataovy ny azo tsapain-tànana endrika hanamafisana rindrina tena na mividy azy. Alohan'ny manapa-kevitra tokony hatao, mariho tsara fa ny orinasa amin'ny simenitra nanamafy peratra matanjaka kokoa noho ianao ireo izay afaka manao ny tenanao. Fa, mazava ho azy, ary dia hitentina bebe kokoa.
Tsara fanorenana ny biriky mitaky fahaiza-manao manokana sy maharitra fiofanana. Walls tokony nanamafy, ary eo ambany biriky mba hanangana ny fototra. Fa, toy ny simenitra, biriky tsy mamela fidirana ho ao an-tsara ny ambonin'ny rano.
Rehefa vonona ny fantsakana
Whichever karazana fitaovana fidinao tsara, indraindray dia mila disinfected. Fanadiovana tokony hatao, fara fahakeliny, indroa isan-taona, ary matetika kokoa raha zavatra tsara hamela vahiny. Ny fanadiovana ny soa fanampiana avy amin'ny rano no pumped paompy. Avy eo, midìna, dia mamoaka ny fomba fitsaboana ilaina. Rehefa zavatra avy any ivelany, silt, fasika sy ny loto esorina avy amin'ny tany sy ny rindrina ao amin'ny lavaka fantsakana, mba nanisy fanafody. Mba hanaovana izany, ny manda ny tsara na mampiasa kifafa borosy amin'ny tenan'ny hatory lava amin'ny Bleach.
Rehefa tsara dia feno rano indray, dia tokony koa manampy Bleach amin'ny habetsaky ny 150 isaky ny 1 litatra levitra ny rano. Rano mifangaro ary voasarona tsara amin'ny sarony, sisa nandritra ny adiny roa. Ny rano avy eo indray pumped ka nanasa tsara tamin'ny rano madio. Ny fomba Miverimberina mandra-chlore fofona intsony.